358 nche ngere
Zita cone Noise Barrier
N'obi Glass Noise Barrier
Ụda mkpuchi Cotton Barrier
Agba Steel efere Noise Barrier
Aluminum efere Noise Barrier
Aluminum ụfụfụ Noise Barrier
Acryli Piel Noise Barrier
FRP soundproofing ngere LRM
Overpass soundproofing ngere LRM
Railway now mgbochi
Highway now mgbochi
Ntụ oyi unit now mgbochi
Hebei 30 afọ factory ala price abụọ waya metal ntupu, 868 na 656 kpaliri welded waya gbachie Product Description ihe: Iji elu àgwà Iron Rod dị ka akụrụngwa, na welded panel, mgbe galvanization, powders Primer, na powders n'elu mkpuchi; ya nwere ike iguzogide corrosive na ultraviolet radieshon nnọọ ike. Ọkpụrụkpụ nke uzuzu mkpuchi bụ 100-120 microns emekarị. The họrọ waya diameters bụ 6MM * 2 + 5MM * 1. 8MM * 2 + 6MM * 1. Ọ obtains elu siri ike ike iguzogide ndị na-ewu. Po ...
Hebei 30 afọ factory ala price abụọ waya metal ntupu, 868 na 656 kpaliri welded waya gbachie
Iji elu àgwà Iron Rod dị ka akụrụngwa, na welded panel, mgbe galvanization, powders Primer, na powders n'elu mkpuchi; ya nwere ike iguzogide corrosive na ultraviolet radieshon nnọọ ike. Ọkpụrụkpụ nke uzuzu mkpuchi bụ 100-120 microns emekarị. The họrọ waya diameters bụ 6MM * 2 + 5MM * 1. 8MM * 2 + 6MM * 1. Ọ obtains elu siri ike ike iguzogide ndị na-ewu.
Nke a System na-emekarị họrọ Square Post (50 * 50mm, 60 * 60mm), akụkụ anọ Post (80 60 * 2. 5mm, 120 60 * 3mm) Na elu ike na na. Na plastic okpu roofing rainhat. The okokụre n'elu-emekarị bụ galvanized na ntụ ntụ mkpuchi, ma ọ bụ Nhọrọ.
Post of Elu
8 2 + 6
6 2 + 5
-Double waya gbachie nwere a galvanized na polyester mkpuchi nke na-anọchite anya 130 micron ọkpụrụkpụ na nkezi.
-Available ọ bụla Ral agba.
-Standard elu 1.03m-1.43m-2.03m. Ndị ọzọ elu ruo iwu.
8/6/8 welded ngere
nsu, welded ngere
6/5/6 Ugboro abụọ waya gbachie
8/6/8 Ugboro abụọ waya gbachie
Mbukota Nkọwa & nzipu Nkọwa
c. Dị ka ndị ahịa chọrọ
15-20 ụbọchị mgbe iji enen
Company Ma Factory Ozi
Hebei Jinbiao Construction Materials Tech Corp., Ltd e hiwere na 1986 ka n'ichepụta waya ntupu ngere na Anping nke bụ waya ntupu isi nke China. Health, obi ụtọ, ihe ịga nke ọma, eziokwu, simpleness, ọdịdị bụ ndị dị mkpa n'azụ Jinbiao si ruuru ịga nke ọma n'ụwa nile.
Ná mmalite ogbo, JINBIAO arụpụtara barbed waya naanị, na na mmepe nke China, ọzọ na ndị ọzọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè na okporo ụzọ na-wuru. Ya mere ebe a bịa ọganihu nke nsu ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, JINBIAO amalite njem nke na-eme ụdị nile nke fences. Na afọ 26 na-alụ, JINBIAO nweela nnọọ aha ọma n'ụwa nile.
Bụ ihe mgbaru ọsọ: Ka iwelie mma nsu ụlọ ọrụ larịị ma nweta ihe ọganihu.
Bụ spirit: Health, ihe ụtọ, ihe ịga nke ọma, eziokwu, simpleness, okike.
-Ndị kacha mma ọrụ, 7 ụbọchị n'izu, ụfọdụ ndị zaa ekwentị, Solomon-Fraị 24 awa ejere gị ozi n'oge ọ bụla.
Previous: 358 nche ngere
Next: nwa oge ngere
1/2 Inch welded waya ntupu ngere
4x4 welded waya ntupu ngere
868 ntupu ngere
Airport ntupu ngere
Anti Cut welded waya ntupu ngere
Ekwe waya ntupu ngere
Ngere waya ntupu
Field waya ntupu ngere
Kpaliri welded waya ntupu ngere
High Security waya ntupu ngere
Metal waya ntupu ngere
Ntụ ntụ ntekwasa waya ntupu ngere
Ịkwanyere ntekwasa waya ntupu ngere
Ịkwanyere waya ntupu ngere
Rfq waya ntupu ngere
Safety waya ntupu ngere
Atụrụ waya ntupu ngere
Ejima Bar waya ntupu ngere
Welded ntupu ngere
Waya ntupu ngere N'ihi ókè Wall
JINBIAO mkpọtụ na ihe mgbochi ọhụụ wụnye ...
Typedị ngosi ụda ihe mgbochi ọhụụ